Indian Grocery – Thet Nandar
Cosmos – Indian Grocery Store – ဒီဆိုင်လေးက state မှာ ရှိတဲ့ Indian စတိုးဆိုင်တွေထဲက တဆိုင်
ဆိုင်ထဲမှာတော့ India က စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း အစုံရသလို ဆိုင်အနောက်ဖက်နားလေးမှာ India CD တွေနဲ့ လတ်လတ်ဆပ်ဆပ် စမူဆာ၊ ဂျလေဘီ၊ မလိုင်လုံး၊ india မုန့် အစုံရတယ်။ ဒီတခေါက်တော့ အဲဒီမုန့်တွေကို ၀ယ်မလာခဲ့ဘူး။
သရက်သီးရေခဲမုန့်ဗူးလည်းတွေ့တယ်။ ၇ဒေါ်လာနီးပါးမို့ ပြန်ချထားလိုက်တယ်။ stop and shop မှာ ရောင်းတဲ့ ရေခဲမုန့် ဗူး အမျိုးအစားတွေက တဗူးကို ၁ဒေါ်လာ၊ တခါတလေ ၂ကျပ်ခွဲ ။ ဈေးလျှော့တဲ့နေ့ ကြာသပတေးနေ့ဆို ဗူးကြီး တဗူးကို ၁ဒေါ်လာ။
ပဲပြုတ်လုပ်တဲ့ ပဲလုံးတို့၊ ကုလားပဲ၊ ပဲ အမျိုးမျိုးနဲ့ ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင် အမျိုးမျိုး ရတယ်။ ပဲစင်းငုံ နဲ့ မနုသနီ ဟင်းရည် ချက်စားချင်ရင်လည်း ရတယ်။ Ready made အထုပ်တွေလည်း အများကြီးပဲ။
smile …. သမီးလေး 🙂
ဆားစိမ်တွေကော၊ ready made အသားဗူးတွေ၊ ဟင်းချက် ပုလင်း အစုံ နဲ့ သရက်သီးသနပ်ပုလင်း
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက တချို့ကို အခုလို ကတ်ထူဗူး နဲ့ ထည့်ပီး ရောင်းသလို၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သရက်သီးတွေကို ရေခဲခန်းမှာ မှန်တံခါးဖွင့်ပီး ၀ယ်လို့ ရတယ်။
ပလာတာ၊ နံပြား၊ ချပါတီ ရေခဲရိုက်အထုပ်တွေ
india အစားအသောက်တွေ ဆိုတော့ ဘာစားရရင် ကောင်းမလဲး စဉ်းစားသော သမီးလေး @.@
ဒီတခါတော့ ဒီ မလိုင်လုံးတွေကို အီနေပီ။ ဘေးနားက တန်းတွေမှာ စီဒီတွေလေ။
ကြံသကာနဲ့ ထညက်ခဲတွေ၊ အဖြူတုံးကြီးကလည်း ထညက်ခဲတုံးကြီးပဲ။ ဘေးက ဆားဗူး
အုန်းသီးကို အမျိုးမျိုးရတယ်။ အရည်၊ လှီးထားသော အုန်းသီးစိတ်၊ အုန်းသီးဖတ်၊ အသီးဗူးများ
မန်းကျည်းသီးနှစ် အထုပ်များ၊ ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင်
ဆိုင်ရှေ့ကနေ မြင်ရတဲ့ ဆိုင်အခင်းအကျင်း မြင်ကွင်း
June 23, 2011 Thet Nandar